kufamba nekushanya | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rubric: kufamba nekushanyirwa
Avo vanowanzoshanyira nzvimbo dzakakurumbira dzemahotera, hapana mubvunzo, havapfuure neiyi inoshamisa nyika seSpain. Kuzorora mukona ino yepasirese kunoreva nzvimbo dzekunyaradzo dzakakwirira! Nyika ino ...
Nhoroondo ye ndege Ndeye Boeing 737-800
Imwe yeanoshandiswa zvakanyanya kubhururuka ndege pamapfupi nepakati-haul nzira dzekutakura akawanda kubva pasi rese, kusanganisira Russia, ndiyo Boeing 737-800. Nyanzvi mhinduro ...
Gungwa reYero kuChina. Gungwa reYero pamepu
MaChinese anoshevedza kuti "Gungwa reYero" Huanghai. Iyo ndeye bheseni yegungwa repasi rose - iyo Pacific. Iri gungwa, rine zita rinoshamisa kudaro, riri kumabvazuva kumahombekombe eEuropean, rakashambwa nemadokero ...
Kwamungaita kuti musunungure muchitoro chirimo uye nevana
Kwaunogona kuzorora zvisingadhura muzhizha.Mubereki wega wega anofanira kuita zvese kuedza kuti mwana wake ashanyire mugungwa muzhizha. Kuti uite izvi, haufanirwe kunge uine chikwama chakakora uye chikuru ..
Vagari veSaratov. Saratov vanhu
Saratov iguta rakakura kumahombekombe eVolgograd reservoir, iri nzvimbo yenzvimbo yezita rimwe chete. Imwe yenzvimbo dzakakosha, dzezvehupfumi uye dzidzo mudunhu reVolga. Musoro mukuru wenyaya ino uchave huwandu hweSaratov. Vangani vanhu vanogara ...
Stations of Ekaterinburg: addresses, directions
Yekaterinburg ndiro guta guru reUrials. Rimwe ramaguta makuru eRussia. Ndiwo muganho pakati peEurope neAsia, uye unokwanisa kukwikwidza zvakachengeteka nemamhepo makuru epasi rose. Hupenyu pano hunogara hwazara mukutenderera ...
Nzvimbo dzekare dzeUkraine. Masvingo nenhare dzeUkraine
Nzvimbo inovakwa chivako chemunguva yakamboshanda seyakavakirwa sosi yedzinza. Kazhinji ichi chiitiko chikuru, icho chinosanganisira dzimba, dzimba nezvivakwa zvinodzivirira. Matunhu eUkraine kubva ku11 kusvika 19 yezana remakore muUkraine ...
Kuenda kupi kuKrasnoyarsk kune vatashanyi: urongwa hwezvinhu zvinofadza zveguta racho
Krasnoyarsk nderimwe remaguta akakura muSiberia. Iyo iri kumativi maviri eRwizi rweYenisei, iyo inopatsanura guta munzvimbo dzinoverengeka: kuruboshwe-bhangi uye kurudyi-bhangi. Imwe neimwe ine yayo akasiyana ...
Mekong rwizi muVietnam. Nzvimbo, kutsanangurwa uye mufananidzo weMekong river
Mekong rwizi rwizi runowanikwa kuchamhembe kweTibetan Plateau, kunyanya paTangla Range. Iyi ndiyo rukova rukuru remvura yeIndochina Peninsula, iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia, uye chechina chikuru ...
Montenegro Hotel, Montenegro, Budva Riviera, Becici: wongororo. Montenegro Beach Resort 4 *
Montenegro inzvimbo inodiwa yezororo kune vashanyi vedu. Mukutsvaga zviitiko zvitsva, vafambi vanouya pano vakaneta nezororo reTurkey kana Egypt. Montenegrin inoshandira rudo rwebasa rekutanga-gungwa, iro rakachenesa gungwa ...
"Sand Bay", Sevastopol: tsananguro uye ongororo
Ndekupi kwekuwana nzvimbo muCrimea yezororo nemhuri yese kana kambani inonakidza? Isu tinopa kune kwako kutarisisa kwetsika uye nhandaro yakaoma "Sand Bay". Sevastopol - iro guta mune iri hotera, ichavhurira iwe zvakanaka ...
Nharaunda yeSumy: misha, matunhu, maguta. Trostyanets, Akhtyrka, Sumy mudunhu
Nhoroondo yenzvimbo ipi neipi yakapfuma mune dzakasiyana, dzimwe nguva kuchinja kwakanyanya hupenyu hwevagari zviitiko. Sumy mudunhu inochengetawo mundangariro dzayo zvinhu zvakawanda zvinonakidza izvo zvave zvichiitika mundima yayo kubvira iyo Bronze Age ...
Bani Kaluga: kero, mifananidzo, maitiro
Nguva nenguva, muviri wemunhu unovhunika, uye kuti uwane kupora zvakakwana, zvinongoda kuzorora nekuzorora. Uye nzira yakanakisa yekuzorora kwakadaro kushanyira imba yekugezesa kana sauna. Izvo zvakanaka ...
Gamba reStalin muAbkhazia: mapikicha uye kuongororwa
Comrade Stalin munhu akaburukira munhoroondo yenyika semuenzaniso mumwe weutsinye, kudzvinyirira, uye kuuraya. Ichokwadi, kumutenda, vanhu vakakwanisa kumisa Hitler uye chishuwo chake. Kunyangwe iye iye ...
Hotel Welcome Jomtien Beach Place 3 * (Pattaya, Thailand): tsanangudzo, mifananidzo uye maitiro
Vazhinji vanofunga kuti kuzorora pagungwa kunogoneka muzhizha chete. Asi kunyangwe nguva yezororo yechando hachisi chikonzero chekuzviramba iwe mukana wekuti uwane yakaisvonaka nyangwe tan uye shambira mugungwa rinodziya uye nyoro. Great ...
Hotel Scandinavia (Sestroretsk): kero, ongororo
Kana wanga uchishuva kutora nguva yekutandarira kubva pagakava uye neguta, enda kuScandinavia Hotel. Sestroretsk nemhepo yayo yakachena uye yakasikwa yakanaka ndeimwe yezvakanakisa sarudzo ...
Hotera Linda Seaview Hotel 4 * (Hainan, China): tsananguro, masevhisi, mapikicha uye ongororo
Hainan chitsuwa cheChinese chiri munzvimbo dzinopisa kwazvo kumaodzanyemba kwenyika. Inonzi "kumabvazuva kweHawaii." Nhasi, pasina kuwedzeredza, ndiyo nzvimbo inozivikanwa zvikuru mu Middle Kingdom. Nenzira, mumakore achangopfuura yakawedzera ...
Metro Vyborgskaya: nhoroondo uye mazuva edu
Munharaunda yenhoroondo yeSt. Petersburg, inonzi "Vyborg Side", mu1975, Vyborgskaya metro station yakavhurwa. Kunyangwe chokwadi chekuti imba yekutandarira haina kupera kwazvo, semapoto ekutanga ...
Sanatoriums eBerdyansk. Sanatorium "Lazurny", Berdyansk. Berdyansk - sanatorium "Niva"
Berdyansk resort (Ukraine) inzvimbo yakakurumbira yekushanya kwehutano kushanya. Zvinhu zvakawanda zvinobatsira kune izvi, kunyanya kupisa mamiriro ekunze uye yakanaka nzvimbo. Zororo riri pamhenderekedzo yegungwa. Berdyansk inozivikanwa nekurapa kwayo ...
Consumates, visa nzvimbo uye nhume yeGreek kuRussia - vanowanikwa mumaguta api?
Greece inoshamisa nyika inotaridzika kwazvo kune vakawanda vashanyi. Uye maRussia haana musaruro. Kuti uwane vhiza, inova mvumo yekupinda munyika ino, unoda ...
peji 1 peji 2 ... peji 379 Next Page
Mibvunzo ye72 mu database yakagadzirwa mu 0,756 masekondi.